Siday Wargaysyada Talyaanigu Boggagooda Hore Ee Maanta Ugaga Hadleen Heshiiskii Cristiano Ronaldo Ugu Biiray Juventus? Iyo Odhaahii Gaarka Ahaa Ee Heshiiskan Loo Adeegsaday. – GOOL24.NET
Siday Wargaysyada Talyaanigu Boggagooda Hore Ee Maanta Ugaga Hadleen Heshiiskii Cristiano Ronaldo Ugu Biiray Juventus? Iyo Odhaahii Gaarka Ahaa Ee Heshiiskan Loo Adeegsaday.
Guud ahaan saxaafada caalamka ayaa si wayn tan iyo shalay wax uga qorayay heshiiskii Cristaino Ronaldo ugu biiray kooxda Juventus laakiin wargaysyada dalalka Talyaaniga iyo Spain ayaa ahaa kuwa xogta ugu badan bixinayay isla markaana waxyaabo badan ka qorayay heshiiska Ronaldo ee Juventus intii ay wada xaajoodyadu socdeen.
Haddaba maanta oo arbaca ah wargaysyada ugu caansan dalka Talyaaniga gaar ahaan kuwa Sportska ayaa boggagooda hore ku soo daabacay sawirka Cristiano Ronaldo iyaga oo si wayn uga hadlay heshiiska aan markii hore la filayn in uu sidan deg dega ugu dhamaan karo ee xidiga ree Portugal ugu soo biiray Juventus.
Juventus ayaa heshiiska Cristiano Ronaldo ka soo bixisay 100 milyan euros waxaana sidoo kale kaga baxay kharash gaadhaya 12 milyan euros taas oo la micno ah in Old Lady ay 112 milyan oo euros ku kharash garaysay Ronaldo wuxuuna muddo afar sano ah kooxdeeda ka qaadan doonaa 31 milyan oo euros sanadkiiba.
Juventus ayaa haddda diyaarinaysa qorshihii ay ciyaartoy kooxdeeda ah oo uu Higuain ugu horeeyo iskaga iibin lahayd si ay ugala soo baxdo lacagta ay xidiga ree Portugal kula soo wareegtay wuxuuna imaatinka Ronaldo sabab u noqon karaa in ay kooxo kale ay xidigo muhiim ah ka heli karaan Juventus.
Shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo koobaysa waxyaabihii maanta oo arbaca ah lagu soo qoray boggaga hore ee wargaysada caanka ah ee Sportska dalka Talyaaniga halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
BOGGA HORE EE WARGAYSKA LAGAZZETTA DELLO SPORT
Wargayska La Gazzetta dello Sport ayaa boggiisa ee maanta oo arbaco ah waxa uu soo sawirka Cristiano Ronaldo oo feedho qaawan isla markaana dabaal degaya waxaana ka danbeeya sawirka madax waynaha Juventus ee Agnelli, Cristiano Ronaldo laftiisa, wakiilkiisa Jorge Mendes iyo xubno kale oo heshiiskan ugu dabaal degaya dalka Giriiga oo uu madax waynaha Juventus ee Agnelli uu shalay diyaar aad khaas ah ku booqday.
Waxaana qoraalka bogga hore lagu yidhi: “Isagu wuu yimid. CR7- Juve way dhan tahay. Dagaalkii milatari ee deg dega ahaa ee Agnelli uu Giriiga ku qaaday, heshiiska qarnigu wuu dhamaystiran yahay. 100 milyan euros oo uu kaga soo wareegay Real Madrid, 31 milyan euros oo xaasil ah xili ciyaareedkiiba oo uu Ronaldo qaadan doono afar sano”.
Waxaana intaas kadib lagu sheegay waqtiga ay Juventus soo bandhigi doonto heshiiska loo bixiyay heshiiskii qaraniga: “Isniinta bandhiga show-giisa ayaa Turin ah”.
Aan soo qaadano wargayska kale ee Corriere dello Sport ee isna Talyaaniga ka soo baxa wuxuuna soo qaatay sawirka Ronaldo oo garanka Juventus ku dabaal degaya waxaana meel yar oo hoose ka muuqda sawirka madax waynaha Juventus, Ronaldo iyo xafladaydiintii dalka Giriiga.
Waxaa far waa wayn lagu soo qoray shirkada Juventus ka caawisay kharashka ay Ronaldo kula soo saxiixatay ee FIAT waxaana sawirka Ronaldo dhinaca sare looga qoray: “FIAT LUX”. Waxaana qoraalka la sii raaciyay: ” Heshiiskii dagaalka milatary ee deg dega ahaa ee Andrea, raiyadii CR& waxay noqotay xaqiiq. Juve markale ayay iftiimisay Serie A. Waxa uu sheegay in uu isagu dalbaday in uu baxo”.
Waxaana qoraalka lagu sheegay waqtiga Ronaldo saxaafada loo soo bandhigi doono: “Jamaahiirtu waxay qasan yihiin, Isniinta ayuu bandhigiisu Turin noqon doonaa”.
Wargayska kale ee TuttoSport ayaa isna soo qaatay sawirka Ronaldo oo xidhan maaliyada Juventus waxaana dusha looga soo qoray: ” Halkan ayuu joogaa. Ronaldo waxa uu noqday Bianconero. Heshiis layaableh oo labada kooxood dhex maray ayaa si rasmi laga dhigay. CR7 qiimihiisa waa 105 milyan euros wuxuuna afar xili ciyaareed sanadkiiba qaadan doonaa 31 milyan euros”.
Markale waxaa lagu xusay waqtiga Ronaldo saxaafada loo soo bandhigi doono: “Isniinta waxaa garoonka ka jiri doona dabaal deg aad u wayn”.
Kuwani waa qaar ka mid ah ciwaanadii boggaga hore ee wargayskada dalka Talyaaniga lagu qoray maanta oo arbaca ah ee heshiiskii ay xalay Juventus kula wareegtay Ronaldo. Haddii ay warbixintani ku xiiso galisay la share-garee asxaabtaada kale.